Abesifazane baKwaDabeka bazoqwashiswa ngodlame olubhekiswe kubo
YINGXENYE yethimba leKasi 2 Kasi elizobe lihambele KwaDabeka ngo-Agasti 9 Isithombe:SITHUNYELWE
Charles Khuzwayo | August 4, 2020
ABANTU besifazane baKwaDabeka, eClermont, bazoqwashiswa ngezindlela abangazivikela ngazo kubantu besilisa ababahlulumezayo emcimbini oseShadows, ngo-Agasti 9 kusukela ngo12 emini.
Umgqugquzeli walo mbuthano, uLwazi Nqetho, uthe usabela ikhwela elishaywe nguNgqongqoshe wamaPhoyisa, uGeneral Bheki Cele, ngesikhathi ethula izibalo zobugebengu kuleli.
UCele ugqugquzele imiphakathi yakuleli ukuba iqhamuke nemikhankaso yokuqwashisa ngokuhlukunyezwa kwabantu besifazane emakhaya. Uthe udlame olubhekiswe kubantu besifazane lubhoke kakhulu njengoba kusavalwe izwe. UNqetho uthe yingakho bezoqwashisa futhi babuye bathuthaze abantu besifazane ukuba babambisane namakomiti alwa nobugebengu namaphoyisa ukuze kunqandwe lesi sihlava emiphakathini.
"Ngalolu suku sizobuye sinikelele ngokudla emiphakathini yakuleli lokishi entulayo njengoba kuvalwe izwe. Sizoyinikelela ngokudla okuzoyigcina izinyanga ezimbili ngoba indlala idlala enkulu indima ekuhlukumekeni kwabantu besifazane abaswele," kusho uNqetho weKasi 2 Kasi Social Relief Program.
Unxuse abantu besifazane bayoyonke imikhakha ukuba bayibambe ngisho insimbi ishisa. Uthe nabantu besilisa bamukelekile ukuba bazozwa iziyalo. "Imithetho yokuvalwa kwezwe sizobe siyilandela ngokwmigomo yezempilo. Sizobe sigqoke izifonyo, sigcoba izibulalimagciwane futhi yonke indawo sizoyifutha ngazo izibulalimagciwane ngokusizwa yiBathathe Essential Service. Abanye asizobe sibahlola ukuthola ukuthi banazo yini izimpawu zeCovid-19, " kuphetha uNqetho.